နွားနို့ခြောက် ~ စန္ဒကူး
ကြော်တာ နဲနဲတူးတယ်..( ထင်တယ်နော်)
နာတို့အိမ်တွေမှာ အလိပ်ကလေးတွေ လိပ်ပြီးကြော်ကြတယ်.။
မန်းလေးမြို့သစ်မှာ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်သူ ၂ဆိုင်ရှိတယ်..။
တို့တွေ အခေါ်က 乳扇 (ရူဆန့်) လို့ခေါ်တယ်.။
အိမ်မှာ ဧည့်သည်ဖိတ်ကျွေးရင် ကြော်ကျွေးတတ်ကြတယ်။
အစိမ်းကို သကြားဖြူးစားတာလဲ ကောင်းတယ်..။
ဟုတ်တယ်ပေါက်စ်ရေ... အစက နဲနဲညိုရုံနဲ့ အဲဒီညိုတာလေးစားရင် နဲနဲအချိုပါလို့ အကုန်ညိုကုန်တာ...
မစားဖူးသေးဘူး ကူးကူးရေ။ အရသာကို မှန်းကြည့်သွားတယ်။
ae dar Mandalay mar pal shi tal htin tar. I like it very much. A sein sar ya tar po kyite tal Sis.
လားရှိုးနေတုန်းက စပြီးစားဖူးတာ..ကျောက်မဲက ပိုပေါတယ်..အလိပ်လေးတွေလုပ်ကြော်တာက မတူးဘူး..ကူးကူးရဲ့
အစိမ်းစားရတာလည်း ကြိုက်တယ်။ လိပ်ပြီးကြော်ရတာတော့ တော်တော်လက်ဝင်တယ်။ အရောင်လိုက်သွားတာက မလိပ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး.. နွားနို့ခြောက်ကြော်ရင် ဆီအပူရှိန်ကို ထိန်းထားရတယ်။ မီးကို ဆီအရမ်းပူလာရင် ခဏပိတ်.. ပြီးရင် ပြန်ဖွင့်ပြီးကြော်ရတယ်။ ဆီပူသွားရင် ထည့်လိုက်တာနဲ့ အရောင်လိုက်သွားရော..
ကွတ်ခိုင် ကျောက်မဲဘက်မှာတော့ တအားပေါတယ် ဈေးကတော့ ပေါပါဘူး
၃၀၀၀ ပါဘဲ.. ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ရှမ်းပြည်ခရီးထွက်တော့ ၀ယ်လာသေးတယ်
စားတာတော့ အစိမ်းလိုက်လဲ စားကောင်းတယ်
origin is from Hsipaw, Kyawme, but the Chinese builtafactory in Mandalay, withagood packing.